Salalnews Network - Articles: Maalinta Hooyada By Bashir Goth
Amina Farah - Allahayow
Waddamada adduunka intooda badan ayaa bisha May xusa maalinta hooyada. Dhab ahaantii haddii Hooyada wanaageeda lagu xuso ammin kasta iyo aradka kasta oo la joogaba lama gudi karo xaqeeda, hase yeeshee waxa lagama maarmaan noqotay in ay yeelato maalin lagu xusuusto. Haddaba heestan soo socota oo la yidhaahdo HOOYO waxan ku xusayaa hooyaday Sheekha Raxma Cige Dirir oo hooyonimada ka sokow ah macallinkaygii ii bilowday Alif-Ba’da ee i bartay akhriska iyo qoraalka Quraanka iyo Afka-Carabiga, indhahayga u furtay nuurka aqoonta. Waana ababiyahaygii igu anqarisay jacaylka suugaanta iyo dhaqanka ee aan sheekooyinkeedii, halaanhalkeedii iyo tixihii ay ii dareerin jirtay yaraantii ay ii noqotay ceel wahdi ah oo aan iga maaxdumin iyo sahay aan madhanayn oo aan kaga gudbo suudiga waayaha, kana qadhaabto midhaha aan suugaanta ku curiyo.
Heesta aniga oo munaasabadda maalinta hooyada u hibaynaya hooyaday waxa la wadaaga hooyo kasta oo adduunka joogta, gaar ahaan kuwa fahmaya Af-Soomaaliga ay heestu ku qoran tahay. In kasta oo ay habboonayd in heesta la dhegeysto iyada oo muusig wadata, xilliga ayaa igu simi waayey, muusiguna goortiisa ayuu iman doonaa isaga oo sida heestu u qorantahay uun u dhici doona. HOOYO
Hurdo nabad ku seexdaa hooyo
Anoo kaa hulleelaad Hooyo
Hobo' baad i leedahay Hooyo
Hadba kii hafeef qaba Hooyo
Waan arkaa humaaggii Hooyo
Waan kugu hadaaqaa Hooyo
Ku waar hoyga aakhiro Hooyo
on May 10 2010 ·
3427 Reads ·
on March 16 2013 01:08:37
on March 23 2013 21:46:00
reading useless will gradually spread in the society, and the existence of the sound,Vibram Five Fingers UK Sale in fact, is the bottom layer of complaints from the people!